Raacid Bilaash ah - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Faa'iidooyinka + > Raacitaan Bilaash ah
Hel safar bilaash ah ballamadaada caafimaad.
Gaadiidka loogu talagalay adeegyada aan degdegga ahayn
Hay'adda Daryeelka Caafimaadka ee Gobolka Washington (HCA) waxay daboolaysaa gaadiidka shaqsiyaadka haddii kale aan haysan awood ay ku helaan daryeel caafimaad. Tan waxaa ka mid ah:
Baska dadweynaha laga raaco
Lacag celinta masaafada iyo macaamilka
Gawaarida curyaamiinta ama gawaarida la heli karo
Baska ganacsiga iyo duulimaadka
Jadwalka safaradaada la jaanqaado bixiyaha gaadiidka ee degmadaada.
Wac a gaadiidka bixiya ee deegaankaaga waxayna kaa caawin doonaan inaad jadwal u raacdo takhtar maxalli ah oo bixiya adeegga aad u baahan tahay. (Haddii dhakhtarka aad rabto inaad aragto uusan ku dhex noolayn bulshadaada, waxaa lagu weydiin karaa inaad ku hesho tixraac.)
Isku day inaad jadwal u sameyso raacida ugu yaraan 7-14 maalmood ballantaada ka hor.
Markasta oo ogeysiis badan aad bixisid, ayay u badan tahay in safar laguu diyaarin karo. Haddii aad codsato raacid taas oo ka yar laba maalmood oo shaqo ka hor ballantaada, waxaa suuragal ah in aan la helin agab, iyo bixiyaha gaadiidku wuxuu ku weydiin karaa inaad dib u dhigato ballantaada.
Waxaan kaa caawin karnaa inaad jadwal u sameyso raacitaankaaga.
Haddii aad dhibaato ku qabtid xiriir la leh bixiyaha gaadiidka sabab kasta ha noqotee, fadlan kala xiriir CHPW at 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711). Waxaan kaa caawin karnaa inaad hesho safar bilaash ah oo aad ku tagto ballamahaaga caafimaad.
U qalmida raacitaanka
Si aad ugu qalanto caawimaadda gaadiidka, waa inaad:
Hayso kaarka adeegyada ProviderOne ee hadda ah
Ma haysato wado kale oo aad ku gaarto ballantaada caafimaad
Hubso in ballanta ay daboolayso Apple Health (Medicaid)
Sida loo codsado raacitaan
The gaadiidka bixiya ee deegaankaaga ayaa kaa caawin doonta inaad jadwal u sameyso gaadiidka dhakhtarka deegaanka ee kuu fidinaya adeegga aad u baahan tahay. (Haddii dhakhtarka aad rabto inaad aragto uusan ku dhex noolayn bulshadaada, waxaa lagu weydiin karaa inaad ku hesho tixraac.)
Hubso inaad gacanta ku hayso macluumaadka soo socda markaad codsanayso adeegyada gaadiidka:
Kaarkaaga adeegaha ee ProviderOne
Cinwaankaaga qaadista oo dhammaystiran
Magaca iyo lambarka taleefanka adeeg bixiyahaaga caafimaad
Taariikhda iyo waqtiga ballanta saxda ah
Nooca ballanta daryeelka caafimaadka (sida: sifaynta, OB, ilkaha, iwm.)
Waqtigaaga soo noqoshada, haddii la yaqaan